DHEGEYSO-Wafti kasocda Puntland oo safar ku tegey gobolka Sool. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Wafti kasocda Puntland oo safar ku tegey gobolka Sool.
Agoosto 29, 2016 9:45 g 0
Garoowe, Aug 30 2016-Wasiirka dastuurka iyo arrimaha federalka ee dowladda Puntland iyo wafti uu hogaaminayey ayaa soo afmeeray safar qaatay mudo shan maalmood ah oo ay kumarayeen deegaamo katirsan gobolka Sool.
Cali Ciise Oogle, iyo waftigiisa ayaa u kuurgelayey xaaladda ammaan, nololeed iyo midda arrimaha bulshada ee deegaamada ay booqdeen, wuxuuna sheegay in deegaanka ay kajirto xaaladda abaareed oo baahsan.
Wasiirka ayaa waraysi uu siiyey Radio Daljir waxa uu ku sheegay in qiimayn kadib ay dowladdu mashaariic horumarineed gaarsiin doonto deegaamada uu dhowaan booqday.
DHEGEYSO-Sarkaal kasoo goostay Alshabab oo lasoo bandhigay